- Total (32nd)
Naijiria (Naigeria, Naịjiria, Naijeria), ezigbo ogologo ahà ya bụ̀ Ọ̀hàn'ezènànchịkọ̀ Naijiria (Federal Republic of Nigeria nà bèkeè), bụ̀ òbòdò dị n'ime Eluàlà, Odi n'akuku odida anyanwu Afrika ana-akpo West Africa. Obu kwa obodo ndị Igbo, ma ndi Hausa na ndi Yoruba nakwa otutu ndi ozo di iche iche. Obodo a na-akpo Republic du Benin no na aka-ekpe Naijiria. Chad na Cameroon no kwa n'aka-nri ya. Na elu ya no obodo ana-kpo Niger. Okpuru ya ruru ebe mmiri a na-akpobu Bight of Biafra nke a gbanwere Gulf of Guinea di. Ebe ahu bukwa ebe mmiri ana-akpo Bight of Biafra di tupu a kpowa ya Bight of Bonny.Na 1991, ebugara isi obodo ya n' Abuja. Isi obodo ya dibu na Lagos nke di na ndida anyanwu (Western Nigeria). Abuja buzi isi obodo no n'etiti Naijiria.